अर्थमन्त्रीको कटाक्ष-बीमा दावी भुक्तानी पाउन दशथरी प्रमाण जुटाएर पनि कुर्नुपर्ने ?
डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री , ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार, ०२:५३ pm
बीमा संस्थानको बार्षिकोत्सवमा यसै गरि यहिँ ठाउँमा आएर कुराहरु सुनेको दशकौं भयो । यसपाली अलि नयाँ कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको छ । छिट्टै नै तपाईहरुले १० वर्षको वित्तिय विवरण तयार पारेर साधारण सभा गर्नुहुन्छ रे भन्ने सुन्न पाएँ । बीमा समितिका अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालसँग पनि जोडेको हुनाले म आशावादी भएको छु ।
सरकारले बीमालाई कसरी हेरेको छ, त्यो कुरा म केहि राख्न चाहान्छु । हामीले संबिधानमा समाजिक सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भनेका छौं । त्यो सामाजिक सुरक्षा बिभिन्न प्रकारका हुन्छन् । सोझै नगद उपलब्ध गराउने एउटा सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसरी नगदमा दिने अनुदान खास खास अवस्थाको व्यक्ति बिशेषलाई मात्रै दिइन्छ । धेरै जसो सामाजिक सुरक्षाहरु योगदानमा आधारित हुन्छन् । बीमा पनि मुलतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नै हो । र योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाको दायरामा बढी भन्दा बढी मान्छे ल्याउन सकियो भने मात्रै सामाजिक सुरक्षाको सर्वव्यापी अवधारणा पुरा हुन्छ ।
हामीले जिवन पर्यन्त सामाजिक सुरक्षा भनेर बाल्यावस्था, विद्यालयको अवस्था, श्रम गर्ने अवस्था र त्यसबाट अवकास भएपछिका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । त्यसमा बीमाका माध्यमबाट पनि केहि सामाजिक सुरक्षाका कामहरु अघि बढाउनुपर्नेछ ।
२२ प्रतिशत जनसंख्यामा जीवन बीमा पुगिसक्यो । त्यसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा भने पनि भयो । बीमाको दायरा अझै पनि बढाउनुपर्ने हामीले देखिरहेका छौं । कमसेकम जीवन बीमाको दायरा र त्यसमा पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई देश व्यापी बनाउनका लागि दुई तीन वटा काम गर्नुपर्नेछ । पहिलो भनेको पहुँच बढाउने हो ।
जसको वित्तिय पहुँच पुग्दैन उनीहरुलाई सरकारले सघाउने हो । चरम गरिबीमा रहेका परिवारहरुले बीमाको प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था छ । म यहिँबाट घोषणा गरिदिन्छु की चरम गरिबीको चपेटामा रहेका साढे १६ लाख परिवार छन् । ३५ सय रुपैयाँमा परिवारकै बीमा गरिदिने र एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिने गरेका छौं । त्यो सेवालाई हामी निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको लागि निःशुल्क गर्छाै ।
त्यो निःशुल्क गरेपछि साढे १६ लाख परिवारका ७५ लाख नागरिक बीमाको दायरामा आउँछन् ।
त्यस बाहेक जो योगदान गर्न सक्छन्, उनीहरुको रकम २५ सयबाट ३५ सय तथा एक लाखबाट बढाएर २ लाखको उपचार सेवा दिने भनिएको थियो । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका हकमा पनि चार सय रुपैयाँ सरकारले नै हालिदिएको छ ।
जो नागरिकहरु आफैं प्रिमियम तिरेर बीमाको दायरामा आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुको बीमा गराउने काम तपाई अभिकर्ताहरुको हो । त्यसका लागि आवश्यक नियामक र प्रवद्र्धकको भूमिका बीमा समितिले निर्वाह गर्छ । संस्थागत रुपमा सेवा पुर्याउने काम बीमा संस्थानको हो । यो संस्थान जेठो बीमा कम्पनी पनि हो । त्यसकारण पनि तपाईहरु त्यो काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । किन भने यतिबेला यहाँ राजनीतिकरण र युनियनकरण भएको छैन भन्ने मैले देखेको छु ।
१९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन्, उनीहरुका बीचमा तपाईहरुले सेवा बेच्न सक्नुपर्छ । संस्था भित्र पनि सोच्नुपर्छ । बीमाका नयाँ अवधारणासहित नयाँ पुस्तलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । अनावश्यक कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकास दिने हो । एकथरी कर्मचारीलाई अवकासमा पठाएर अर्काथरी कर्मचारीलाई भित्र्याउनु हुन्न । अभिकर्तासँगै शाखा सञ्जाल पनि विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।
भाषागत बिबिधताका कारण पनि तराई मधेशमा भारतीय कम्पनीको बजार बढेका देखिन्छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषामा अभिकर्ताहरु तयार पार्नु होला । अनि मात्रै विदेशी कम्पनीलाई तराई मधेशबाट खेद्न सक्नुहुन्छ ।
लघु बीमामा लामो समयदेखिको प्रयास अब अघि बढेको छ । सानो व्यवसायहरु धेरै खाले जोखिममा हुन्छन् । त्यसकारण त्यस्ता उद्यमीहरुको जीवन बीमा गर्नुपर्छ । सरकारले साना उद्योगीमा सहुलियत कर्जाबाट ऋण दिँदा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिएको छ । ऋणीका हकमा पनि व्यक्तिले बीमा गरेको छ भने व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ ।
तपाईहरु कर छुटै छुट भनिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई कर छुट दिँदा ति गरिबहरुले चाँही त्यस्तो छुट पाउँदैनन् । त्यहि भएर तपाईहरुलाई कर छुट कम गरेको हो । अर्थमन्त्रीको काम कर उठाउने र पुनर्वितरण गर्ने हो । तल्लो वर्गको उत्थानका लागि तपाईहरुले कर तिर्नु पर्छ । त्यो वर्गलाई माथी उठाउन सकिएन भने हामी श्रमजीवी वर्गको पार्टी कसरी हुन्छौं र ?
त्यसकारण करको बिषयमा म अलि कठोर नै छु साथीहरुले यति कुरा बुझिदिनु होला ।
हामीले अघिल्लो वर्ष मात्रै २ अर्ब भन्दा बढी रकम त प्रिमियमको अनुदानमा खर्च गर्यौं । बीमा क्षेत्रमा हामीले यति धेरै मेहनत गरिरहेका छौं । निरपेक्ष गरिबीबाट माथी आउन पनि स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोगी परिवार उपचारका नाममा थला परिरहन्छ र गरिबीबाट माथी आउन सक्दैनन् । हामीले गर्ने बीमाहरुले गरिबीबाट माथी आउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं सञ्चालक र नियामक निकायका रुपमा छ । त्यसले अहिले सञ्चालक, एक्चुरी र बैंकको सबै काम आफैंले गरिरहेको छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेछ ।
त्यो काम अब हामी बाडफाँट गर्छाै । स्वास्थ्य बीमाका सबै स्किमहरु सञ्चालन गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुले नै हो । नियामक र प्रवद्र्धकहरुले संयोजन, प्रवद्र्धन गरिदिने मात्रै हो ।
भुक्तानीमा ध्यान दिनुस्
बीमा गर्यो, समयमा भुक्तानी पाउन गाह्रो, दशथरी प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा हामी उच्च प्रबिधिको उपयोग गरेर दुर्घट्नाहरुको विवरण संकलन गरेर रियल टाइम भन्छौं नी तत्कालै सुबिधा लिन सक्ने अवस्थामा र्छाैं । क्षतिपुर्ति दिन सक्ने, बीमकको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थामा गइएन भने हामीले जति सुकै संस्था विस्तार गरेपनि बीमाको विस्तार हुँदैन् । हामीले छिटो तरिकाले भुक्तानी पाउने प्रणालीमा जानुपर्छ । आफुले सुरक्षित हुनका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल समयमा पाइएन भने कोहि पनि त्यहाँ जाँदैन् ।
बीमा गर्ने संस्थाहरुको पनि पुनर्बीमा हुनुपर्छ । बीमा गर्ने कम्पनीहरुले बहन गरेको जोखिम पनि बिभिन्न तहमा बाढिनुपर्छ । अहिले हामीसँग एउटा पुनर्बीमा कम्पनी छ, अब छलफल चलाऔं । के यो पर्याप्त छ ? एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी सधै भैरहनुपर्ने हो र ? यदि हामीले बीमाका जोखिमलाई बिविधिकरण गर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम पनि बिबिधिकरण गर्नुपर्छ होला । विज्ञहरुले सोच्नु होला ।
फेरी पनि लघु बीमाकै कुरा गरौं । ठुला ग्राहक खोज्ने, ठुला बीमा मात्रै गर्ने अनि स साना ग्राहकलाई हेर्दै नहेर्ने कुराले तपाई बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई आक्रान्त पार्नु भएको थियो । त्यसैले आफ्नो कारोबारको ५ प्रतिशत लघु बीमा गरेकै हुनुपर्ने भनेका छौं । यसको आकार अझै बढ्दै जान्छ । लघु बित्तमा पनि मेरै कार्यकालमा ५ प्रतिशत पुर्याईदिएको थिएँ । लघु बीमामा पनि छिट्टै १० प्रतिशत पुगेको समाचार पाउन सकियोस् ।
लघु बीमा कम्पनी पनि
बैंकहरुले सहायक कम्पनीका रुपमा लुघ बित्त कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् । अब बीमा कम्पनीहरुले पनि सहायक कम्पनीका रुपमा लघु बीमा खोल्न पाउनेबारे सोचौं । सहायक कम्पनीको मोडलका बारेमा पनि काम अघि बढाउनु होला ।
अहिले विश्वमा यस्ता धेरै कम्पनीहरु ओभरल्यापिङ भैरहेका छन् । टेलिकम कम्पनीहरुले बैंकिङ चलाउँछन् । आइटी कम्पनीहरुले मुद्रा निष्काशन गर्छन् । केन्द्रिय बैंकको भूमिकालाई नै अप्ठेरो पार्ने गरि कतिपय एक्सचेञ्जहरु हुन्छन् । यी त चलेकै छन्, मैले चाँही आफ्नो मुल काम के हो त्यहि अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । बैंकहरु मुद्रा र विदेशी विनिमय बजारका खेलाडी हुन् । त्यहिबाट आफ्नो बजार विस्तार गर्ने हो । बीमा पनि बैंकिङ तिर नजानु होला । (राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बार्षिकोत्सव समारोहमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको मन्तव्य)
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन परिसंघको शर्त, आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह
हाम्रा यी मागहरु सम्बोधन भए मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन्छौंः बैंकका कर्मचारी